IFTIINKACUSUB.COM: Maxaynu maalin uun u arki weynay isaga oo af Carabi ku hadlaaya?
Maxaynu maalin uun u arki weynay isaga oo af Carabi ku hadlaaya?
Nin baa beri nin kale oo ay saaxiib ahaayeen ku yidhi: "Waar horta ‘hebel’ in uu wax soo bartay ayuu waa hore inoo sheegaye, maxaynu maalin uun u arki weynay isaga oo afafka Carabiga ama Ingiriisiga mid uun ku hadlaya?" Ninkii su’aashaa la weydiiyey jawaab toos ah ma uu bixin, hase yeesho ee wejigiisa waxa laga garan karayey in uu weydiinta u bogay una qaatay mid macquul ah oo in la isweydiiyaa ay gar tahay.
Aqoonta ugu badani maanta waxa ay ku qoran tahay afaf shisheeye oo afkeenna si walba uga duwan. Markaa haddii uu qofku yahay qof afkiisa hooyo oo keli ah wax ku soo bartay had dhow marka uu meelaha dhiganayaasha kala dudduwan lagu kaydiyo tago waxa uu noqonayaa sida qof cusub oo ku jira xaalad ku cusub oo in uu la jaanqaadaa ay adag tahay. Waxa ku adkaan karta aqoonta casriga ah ee afafka kale ku qoran in uu si fiican uga bogto ama uu afkiisaba u rogo ama u soo turjumo.
Maahmaah Faransiis ahayd oo aan mar meel ka akhriyey ayaa waxa ay u dhignayd sidan: "Ninka laba af yaqaannaa waxa uu u dhigmaa laba nin". Sidaa darteed, iyada oo aanu qofku afkiisa dayacayn ama liidayn in uu afaf kale wax ka bartaa waa wax-ku-ool. Haddii kale oo uu qofku afkiisa oo keli ah ku koobnaado waxa uu noqonayaa sida qof go’doon ah oo haddana dhego xidhan oo kale!